ဒီတစ်ပတ် ဆန်နီနေမင်း ဂျာနယ်မှာရေးသားထားတဲ့ အလိုလိုက်သည်ဆိုသည်မှာ ဆောင်းပါးလေးပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဒီတစ်ပတ် ဆန်နီနေမင်း ဂျာနယ်မှာရေးသားထားတဲ့ အလိုလိုက်သည်ဆိုသည်မှာ ဆောင်းပါးလေးပါ
ဒီတစ်ပတ် ဆန်နီနေမင်း ဂျာနယ်မှာရေးသားထားတဲ့ အလိုလိုက်သည်ဆိုသည်မှာ ဆောင်းပါးလေးပါ
Posted by ဆန်နီနေမင်း on Oct 11, 2011 in Copy/Paste |4comments
လူ့လောကတွင် ”အလိုလိုက်တယ်”ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သူသူငါငါ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ အဲဒီလိုပြောဆိုနေကြပေမဲ့ အလိုလိုက်တာနဲ့ အလိုက်သိတာ ဘယ်ဟာကို ကျင့်သုံးသင့်သလဲ ဆိုတာကိုတော့ သေချာမသိကြတာက များပါတယ်။ ”အလိုလိုက်တယ်”ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ”အလိုက်သိတယ်”စကားလုံးနဲ့ စာသားချင်းဆင်ပေမဲ့ အဓိပ္ပါယ်ချင်း မတူညီပါ။ အလိုလိုက်တယ် ဆိုတဲ့စကားကို မိဘနှင့်သားသမီး၊ ဆရာနှင့်တပည့်၊ လင်နှင့်မယား စသူတို့ကြားတွင် သုံးနှုန်း နေကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလိုလိုက်ရမလား၊ အလိုက်သိရမလား။ ဘယ်ဟာကို လိုက်နာကျင့်သုံး ရမလဲဆိုတာကိုတော့ မသိကြပေ။
အလိုလိုက်တယ်ဆိုတာ သားသမီး၊ တပည့်များရဲ့ အလိုကိုလိုက်ပြီး သူတို့လုပ်ချင်တာကို ခွင့်ပြုပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို သူတို့လုပ်ချင်တာကို ခွင့်ပြုပေးလိုက်ရင် သားသမီး၊ တပည့်များဟာ မကောင်းတဲ့ဘက်သို့ အလိုက်မှားသွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ မိမိက သူတို့အလိုမလိုက်ဘဲ သူတို့လိုအပ်တာလုပ်ပေးခြင်း၊ သူတို့လိုအပ်တဲ့ အသုံးအဆောင်များကို မိမိကလေ့လာစဉ်းစားပြီး ၀ယ်ပေးခြင်းစတဲ့ ပြုလုပ်ပေးသင့်တဲ့အရာများကို ပြုလုပ်ပေးရမှာပါ။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ မိဘများက သားသမီးများ စိတ်အလိုလိုက်ကာ သူတို့ဖြစ်ချင်တာကို ခွင့်ပြုပေးမှသာ မိဘကောင်းဖြစ်မဲ့ဟုယူဆပြီး အလိုလိုက်ပေးမယ်ဆိုရင် သားသမီးများ လမ်းမှားရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါတင်မကဘဲ သားသမီးများရဲ့အလိုကို လိုက်ပေးတာများပါက နောက်ပိုင်းမှာ သားသမီးများဟာ မိဘများအား မထိမဲ့မြင် အလေးမထား ဂရုမစိုက် ခပ်ပေါ့ပေါ့တွက်ကာ လုပ်ချင်ရာလုပ်ကြတော့မှာပါ။ ”မိဘတွေက တို့ကိုဘာမှမပြော အလိုလိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့် ငါတို့ဘာလုပ်လုပ် အပြစ်မပြော”ဟု ထင်မြင်ယူဆချက်များ ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ သားသမီးများဟာ မိဘများရဲ့ သွန်သင်ဆုံးမှုမရှိတော့ဘဲ မိဘသြဇာအားနည်းလာရင် သူတို့စိတ်ကို သူတို့ပိုင်တယ်ဟုထင်လာကာ ထင်ရာဆိုင်းပြီး မိဘများ အရှုံးပေးရတဲ့ သားသမီးများဖြစ်သွားပါက လူတော်လူကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ မလွယ်တော့ပေ။
မြန်မာပြည်မှာ ရဟန်းစုစုပေါင်း ဘယ်နှစ်ပါးလောက် ရှိပါသလဲ ဘုရား ???
မြန်မာပြည် ဗုဒ္ဓဘာသာ လူဦးရေနှင့်ဆိုရင် ရဟန်း ဘယ်နှစ်ပါးလောက် ရှိရင် သင့်တော်ပါမလဲ ဘုရား ???
( Sustainable development ကိုဆိုလိုတာပါ ဘုရား )
သံဃာ့ မဟာနယက စတဲ့ သံဃာ့ အဖွဲ့အစည်း တွေကကော
ဒီကိစ္စမျိုး စာတမ်း ပြုစုထာ ရှိပါသလား ဘုရား ???
အင်း မြန်မာပြည်မှာ ရဟန်းသံဃာ (၅)သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့ မြို့နယ်အလိုက် ၀ါဆိုသံဃာစာရင်းများအရ ဆိုပါတယ်။ တိကျတဲ့အရေအတွက်ကိုတော့ ၀ါဆိုခါနီးမှသာ သိရပြီး ကျန်တဲ့ချိန်တွင် တိုးသူရော၊ လျှော့သူရော ရှိတဲ့အတွက် သေချာမသိနိုင်ပါ။ သို့သော် ခန်းမှန်းခြေဖြစ်တဲ့ ငါးသိန်းကျော်ကတော့ လက်ရှိအချိန်ထိ လျှော့နည်းမသွားသေးလို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာလူဦးရေနဲ့ သံဃာအရေတွက်ဟာ ဒီလောက်ဆို ကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်။ အဓိကကတော့ ရဟန်းကလည်း ဟောပြောဆုံးမပေးပြီး ရဟန်းလိုနေဖို့နဲ့ လူများကလည်း ဟောပြောဆုံးမသမျှကို လိုက်နာကျင့်သုံးပြီး လိုအပ်တာများ ထောက်ပံ့ပေးနေမယ်ဆိုရင် နည်းသည်များသည် ဤနှစ်လီအထူးမဟုတ်ပါ။ ဆရာဒကာလက်တွဲညီညီနဲ့တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ရိုသေလေးစားကြပြီး မကောင်းမှုများမှရှောင်ကာ သာသနာကို ကမ္ဘာပြန့်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပါပဲ။
အသိတရား အများကြီး တိုးပွားရကြောင်းပါ
နောင်လည်း ဂေဇက်တွင် အရှင်ဘုရား တရားတော်/ဆုံးမစာ/လမ်းညွှန်စာ များကို